Madasha xildhibaannada Nairobi iyo Boqol-jirka Dowladda
Home Somali News Madasha xildhibaannada Nairobi iyo Boqol-jirka Dowladda
A. In ay khalad tahay dhalashada Madashan, lagana hor-tago, lana joojiyo, kuna tilmaameen; khiyaano qaran, Saadicuun bil-xukuuma, Xildhibaano xil ama dhaqaale doon ah, fara-shisheeye, Qabyo iyo Xasilooni oo magacii u bedeshay Horu-socod, Dal-jir oo gashatay shaati kale, Xildhibaan Xasan Sheikh iyo Xildhibaan Cumar Cabdirashid oo gadaal ka taagan, markii looga adkaaday doorashadii oo ay heleen fursad aysan helin 20 kii musharax ee kale oo ah; xubin-nimo Xildhibaan, galaan-gal Xildhibaano iyo abaal dhaqaale iyo awood-siin Xildhibaano…iwm.
Hadaba doodaas iyo daliilkeeda kadib aan fiirino wax-qabadkii Xukuumada 100 maalmood:
Waxaa intaas sii dheer in ay dalka joogaan 1000 ilaa 1500 Siyaasi, from M. C/qasim ilaa M. Xasan oo qaar badan wax xil ama shaqo ah aysan hayn, mid kale oo ka baxsan dawladana aysan qaba karin marxaladaan, iyaga oo raba; in la qaabilo, la dhageysto, shaqo ama shaxaad la siiyo, hoteelada laga dhiibo, xanta dawlada loo sheego si ay dadka ugu sii fasiraan. Hadii aan xal loo helin waa fadhi-kudirir, xan marka danbe run-noqota, dagaal-joogta ah iyo buundo u dhaxeysa Shacabka iyo Dawlada.